Beautiful memories[Hunhan Yaoi] - Wish of Galaxy - Wattpad
Beautiful memories[Hunhan Yaoi]
Ongoing - Updated Oct 14, 2016
ညသန်းခေါင်ယံအချိန် မှိန်ပျပျသာရှိနေသော လမ်းမီးတိုင်များ၏အကူအညီဖြင့် တံတားအောက်တွင် စည်းချက် ညီညီ ကခုန်နေကြသော ကောင်လေ6း ယောက်...
Just love me right~~~ love me right~~~~
ဖုန်းမှ ဖွင့်ထားသော Love me right သီချင်းသံကို လိုက်ဆိုရင်း
သူ့ နေရာသူ လိုက်ဖက်ညီစွာ ကနေသော ထိုကောင်လေးတစ်စုက
ကင်းလှည့်သောရဲတွေ မလာခင်အထိ သီချင်းသံထဲတွင် နစ်မြောရင်း...
&quot;ရဲတွေ လာပြီ ! ပြေးကြတော့&quot;
မျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ့ အုပ်စုကို သတိပေးလိုက်တော့ ကောင်လေးတွေ အသည်းအသန် ထွက်ပြေးကြသည်...
ရဲနှစ်ယောက်ကလည်း သူတို့ နောက်က အဆက်မပြတ်လိုက်လာသည်...ကြာလာတော့ သူတို့ လို အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်တွေရဲ့ပြေးနှုန်းကို ငါးဆယ်ကျော် ခြောက်ဆယ်နားကပ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ရဲသားတွေက မမှီတော့ဘဲ မျက်ခြေပြတ်ကျန်ခဲ့သည်...ထိုအခါမှ သူတို့ တစ်စု ပြေးနှုန်းကို လျှော့လိုက်ကြကာ
&quot;ဟူး!မောလိုက်တာ...တော်သေးတာပေါ့...Kyung Soo ပြောပေလို့ မဟုတ်ရင် ဖမ်းမိသွားမှာ&quot;
&quot;ဒါနဲ့ ငါတို့ တွေ ဒီလို ဆက်လုပ်နေလို့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ်...တစ်နေ့ မဟုတ် တစ်နေ့ တော့ မိမှာပဲ&quot;
&quot;ပြိုင်ပွဲရက်ကလည်း ဘယ်လောက်မှ မလိုတော့ဘူး...ဒီအတောအတွင်းအကကျင့်
အူးဆယ်​ဟွန်းရက်​စက်​လယ်​~ငလုမစိတ်​နာလိုက်​စမ်းကွာhehe..parli update seyo~ဇာတ်​လမ်းဆန်းတယ်​author nim**respect✌
​နောက်​ပိုင်း​ဒေအရမ်းဖတ်​ချင်​​နေုပီauthorရယ်​so good .
author ရယ်မြန်မြန်ဒိတ်ပေးပါညော် ဇာတ်အိမ်ကအရမ်းမိုက်တယ်
Reply Get notified when Beautiful memories[Hunhan Yaoi] is updated Continue with FacebookContinue
My Chewing Gum By Oh_HanMi_27
Can you trust the Playboys??? Can A playboy love another Innocent boy ? True loves never be straight and clear. Did you know There'saDangerous Storm Behind the Romantic Fancy Love Affair! If  The Love alikeaChewing Gum Fly away From him likeaFeather...?
I don't think I should wait. I think I should speak now.
CatchingaBambi : I'm Luhannie's Sehunnie
ကျနော်လား? Single မဟုတ်ဘူးလေ... Luhannie ရဲ့ Sehunnie ^^
Sehunnie ကကျနော့်ချစ်သူ... လာမထိနဲ့ မီးပွင့်သွားမယ်
Type >> Yaoi, Sweet, Romance, Comedy
Title-Why did I fall in love with you?
Luhan and Sehun were bestfriends.
When Luhan started to have feelings on Sehun...............
JustaFICTION[HunHan]
If Love is Real ,............
တန်ဖိုးထားရတဲ့ သူကို ဆုံးရှုံး ပီးသွားတော့ ကျွန်တော် ဘဝ ကြီး တစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်သွား ခဲ့ရပေမဲ့ ကံကြမ္မာ က ကျွန်တော့် ဘက်မှာ ရှိတယ်နဲ့ တူပါတယ် ကျွန်တော့ ရင်ခုန်သံ မျှော်လင့်ချက် တေ ထပ်ရှင်သန် လာခဲ့တယ် Sehun -ah မင်းကို နောက်တစ်ခါ ထပ်ပီး အဆုံးရှုံး မခံနိုင်တော့ဘူး
ကျွန်တော် သူ့ကို မသိဘူး မမြင်ဖူး ဘူး ဒါမဲ့ သူနဲ့ တွေ့ရင် ကျွန်တော် ရင်ခုန်မိတယ် ရင်ဘတ်ထဲက လည်း အောင့်လာတယ် ခင်များ ဘယ်သူလဲ ကျွန်တော့် ကို ဘာလို့ ခင်များ အရိပ်ထဲက မထွက်နိုင်အောင် လုပ်ရတာလဲ Xiao Luhan ????
Title-The One That Got Away
Cast-Luhan,Sehun,the rest of EXO,Sunny of SNSD
Luhan and Sehun were lovers when they were in college.After one year relationship, they broke up and chose their own ways.What will happen when they accidentally met again after 22 years later???